Tusaalaha codsiga ee riigga qodista SWMC ee injineernimada sawir-qaadista |
Iyada oo yaraanta sii kordheysa ee tamarta dhaqameed, horumarinta iyo ka faa'iidaysiga tamarta cusub ayaa soo jiidatay dareenka dhammaan dalalka adduunka oo dhan. Isla mar ahaantaana, tamarta cusub ee sawir-qaadista ee Shiinaha ayaa si degdeg ah u kobcaysa, tignoolajiyada ayaa si tartiib tartiib ah u bislaaday, soo dhowaanaysa ama gaadhaysa heerka sare ee aduunka. Sidaa darteed, waddanku wuxuu soo bandhigayaa jihada horumarinta, ujeedooyinka istaraatiijiyadeed, hawlaha ugu muhiimsan iyo cabbiraadaha siyaasadda ee sawir-qaadista.
Mashruuc koronto koronto oo sawir leh, oo leh awood la rakibay oo la qorsheeyay oo ah 40MWP (MW), ayaa ku yaal magaalada Wulanchabu, Ismaamulka Mongolia gudaha, oo leh meel sare oo ku saabsan 1500-1520 mitir, oo ka tirsan cimilada monsoon-ka qaaradaha iyo cimilada qalalan ee lamadegaanka ah Aagga dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah, oo ay saamaysay cadaadiska dhulka Mongolian, heerkulka ugu sarreeya waa 36.5 darajo, heerkulka ugu yar waa laga jaray 39 darajo, qoto dheer ee ciidda barafaysan waa 220cm, qoto dheer ee barafka waa 19cm, celceliska sanadlaha ah roobabku waa 315.3mm.
Machadka naqshadeynta ayaa ugu dambeyntii go'aamiyay nidaamka qodista tuullada sawir-qaadista sida soo socota: 150mm aperture, 1.0-1.5m qoto dheer oo dalool ah.
SWMC waxay bixisay 8 unug SWMC 370 mashiinada qodista oo ku habboon dhismaha sawir-qaadista, 5 unug SWMC 360 mashiinnada qodista oo leh awood fuulid xoog leh, 3 unug SWMC D50 mashiinnada qodista oo ku habboon dhaqdhaqaaqa dhulka degdega ah ee goobta sawir-qaadista, wadar ahaan 7 dhigay SLLAIR American 600RH iyo 55 kombaresarada hawada, 4 qaybood Fusheng Elman 630 kombaresarada hawada, iyo 5 qaybood Liuzhou Fuda 180-19 kombaresarada hawada.
SWMC 370, SWMC 360 iyo SWMC D50 driller waxay isticmaalaan gurguurta si ay u socdaan, kaas oo leh laqabsiga dhulka wanaagsan, xasilloonida wanaagsan iyo waxqabadka badbaadada sare. Awoodda wax soo saarka mashiinka wareeggu waa weyn yahay, kaas oo lagu dhameyn karo hal mar iyadoo la raacayo xaaladaha juqraafiyeed sida dhagax-dhagaxa iyo dabaysha, iyada oo aan loo baahnayn qodis labaad.
Compressor hawada Sullar, Fushenger kombaresarada hawada, Liuzhou Fidelity kombaresarada hawada, marka dalool dalool weyn si ay u ilaaliyaan xasiloonida cadaadiska, si ay u ilaaliyaan xawaaraha geedi socodka oo dhan.
Awoodda fuulista 40 digrii ee Drilling Rigs ee SWMC 370 iyo SWMC 360 waxay hubisaa horumarka mashruuca. meelaynta dhinaca, meelaynta degdega ah oo saxda ah iyo qodista, si looga fogaado wakhti lumis.
Qodista Rigs SWMC 370, SWMC 360 iyo SWMC D50 waxay ku qalabaysan yihiin impellers submersible marka la qodayo lakabyada dhagaxyada.Marka la qodayo carrada ka dibna lagu bedelayo tuubooyinka auger.
Iyadoo 16 Qodista RIGS ee mashruuca, ayaa hawsha qodista 4 1MW oo isku wareeg ah (wadarta 800 kooxood oo leh 6,400 godad) ayaa lagu dhameeyay hal bil gudaheed, taas oo hubinaysa tayada mashruuca iyo jadwalka, mana dhicin shilal badbaado ah intii lagu jiray habka dhismaha. Isla mar ahaantaana, oo ay weheliyaan sifooyinka mashruuca goobta, sida ay shuruudaha maxaliga ah si ay u qaadaan tallaabooyin dhismaha kala duwan, habka formation godka waa siman, tayada wanaagsan, ka dib markii saddexaad ee imtixaanka, dhammaan tilmaamayaasha imtixaanka buuxi shuruudaha design rasmiga ah iyo design, iyo waxa uu helay waayo-aragnimo ka fiican qodista, iyo faa'iidada codsiga mashruuca dhismaha mustaqbalka.
Waqtiga boostada: Nov-02-2020